Asalka WKG, Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Kaniisadda Adduunka ee Ilaah ee loo yaqaan "WKG", Ingiriisiga 'Worldwide Church of God' (oo loo yaqaanay ilaa Abriil 3, 2009 meelo kala duwan oo adduunka ah oo hoos yimaada magaca "Grace Wadaag Caalami ah"), wuxuu ahaa 1934 gudaha Mareykanka isagoo ah "Radio Church of God" oo uu qoray Herbert W. Armstrong (1892-1986) waxaa la aasaasay. Maaddaama uu ahaa khabiir hore oo xayeysiis ah oo wacdiye ka dhiga Kaniisadda Ilaah ee Maalinta toddobaad, Armstrong wuxuu horrey u ahaa wacdinta injiilka isaga oo raadiya iyo 1968, idaacadaha telefishanka "Berrito Adduunka" (Adduunyada berrito »). Joornaalka "The Plain Truth" Magazine, oo sidoo kale la aasaasay Armstrong sanadkii 1934, waxaa sidoo kale lagu daabacay Jarmal ilaa 1961. Marka hore "runta runta" iyo 1973 sida "Cad & Run". Sanadkii 1968 waxaa la aasaasay Jaaliyaddii ugu horreysay ee ku hadasha afka-Jarmalka ee Iswisarland oo ku taal magaalada Zurich, waqti gaaban kadib Basel. Bishii Janaayo 1986, Armstrong wuxuu u magacaabay Joseph W. Tkach inuu noqdo kuxigeenka guud. Kadib dhimashadii Armstrong (1986) isbeddelo aayar ah ayaa ka soo muuqday Tkach Senior ilaa wacdigii caanka ee Christmas 1994, kaas oo Tkach uu shaaca ka qaaday in kaniisaddu aysan ka yarayn jirkii hore, laakiin ay hoos imaaneyso axdiga cusub. Isbeddeladaa layaabka leh ee ka dhashay, kuwaas oo tan iyo 1998dii sidoo kale horseeday dib-u-habeyn ku samee kiniisaddii oo dhan iyo dib-u-eegis muhiim ah oo ku saabsan dhammaan buugaagtii hore, ayaa u beddelay bulshada wakhtigeedii dhammaaday ee xag-jirnimada ah inay noqdaan "Caadi" Kaniisadda Evangelical Free Church.
Ciise Masiix nolosha wuu beddelaa. Waxay kaloo beddeli kartaa urur. Tani waa sheekada sida Eebbe u yahay kaniisadda adduunka ee Ilaah (WKG) laga soo bilaabo kaniisad weyn oo Axdiga Hore ku jiheysa oo leh kaniisad wacdi. Maanta waa wiilka Tkach sen. Dr. Joseph W. Tkach, Jr. Wadaadka guud ee Kaniisadda qiyaastii 42.000 xubnood oo qiyaastii 90 dal oo adduunka ah. Swiiserland dhexdeeda, Kaniisadda Adduunka ee Ilaah waxay qeyb ka ahayd Isbaheysiga Switzerland ee wacdinta laga soo bilaabo 2003 (SEA).
Sheekada waxaa ku jira xanuun iyo farxad labadaba. Kumanaan xubnood ayaa ka baxay kaniisadda. Laakiin kumanaanka waxaa ka buuxa farxad iyo dib u soo cusboonaaday badbaadadooda badbaadiyahooda iyo Bixiyaha Ciise Masiix. Waxaan imminka qaabilaynaa una doodeynaa dulucda axdiga cusub, Ciise: nolosha, dhimashada, iyo sarakicidda Ciise Masiix. Shaqadii furashada Ciise ee aadanaha waa udub dhexaadka nolosheena.
Fahamkeena cusub ee Eebbe waxaa lagu soo koobi karaa sidan soo socota:
Saddexmidnimada Eebbe abuuray dadka oo dhan. Iyada oo loo marayo dabeecadda rabaani ah iyo aadanaha Ciise Masiix, dadka oo dhami waxay ku raaxeysan karaan jacaylka Aabaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah.
Ciise, oo ah wiilkii Ilaah, wuxuu noqday bini-aadam. Wuxuu u yimid dhulka inuu la heshiiyo aadanaha oo dhan Ilaah iyadoo la marayo dhalashadiisa, noloshiisa, dhimashadiisa, sarakiciddiisa iyo kororkiisa.
Ciise iskutallaabta lagu qodbay, oo la sara kiciyey oo la ammaaniyey waa wakiilka aadanaha ee midigta Ilaah wuxuuna dadka oo dhan u jiitaa isaga xagga xoogga Ruuxa Quduuska ah.
Masiixa dhexdeeda, aadanaha waa jecel yahay wuuna aqbalaa Aabbaha.
Ciise Masiix, allabarihiisa oo iskutallaabta lagu qodbay, wuxuu mid mid u bixiyay Malachi dhammaan dembiyadeenna. Wuxuu bixiyay deyntii oo dhan. Isagoo ku jira Masiixa aabaha ayaa inaga cafiyay dambiyada iyo damacyada oo dhan oo aan u jeesano oo aan aqbalno nimcadiisa.
Waxaan ku raaxeysan karnaa oo keliya jacaylkiisa haddii aan aaminsanaano inuu ina jecel yahay. Waxaan ku raaxeysan karnaa oo keliya cafiskiisa haddii aan aaminsanahay inuu ina cafiyey.
Waxaa ku hagaya Ruuxa Quduuska ah, waxaan u leexanaynaa xagga Ilaah. Waxaan aaminsanahay warka wanaagsan, iskutallaabteenna kor u qaadnaa oo raacno ciise. Ruuxa Quduuska ahi wuxuu ina hagayaa nolosha cusub ee Boqortooyada Ilaah.
Cusboonaysiintaan dhameystiran ee iimaankeenna, waxaan aaminsanahay inaan sameyn karno adeeg jacayl qiimo leh si aan dadka ugu horseedno Ciise oo aan ugu raacno dariiqaas.
Haddii aad raadineyso jawaabo su'aalahaaga ku saabsan Ciise Masiix iyo sida ay isbeddel ugu sameyn karto noloshaada, ama haddii aad raadineysid bulsho Masiixi ah oo kuugu yeera gurigaaga ruuxiga ah, waxaan aad ugu faraxsanaan laheyn inaan kula kulanno oo aan kula kulanno Si aan kuu duceeyo